कालीगण्डकी महाकाव्यको शैल्यक्रिया
editor — Sun, 06/25/2017 - 02:55
नवराज पान्डेय ‘चातक’को जन्म २०२१ सालमा पिता पंण्डित सिद्धिनाथ पाण्डे र माता जानकी पाण्डेका पुत्ररत्नको रूपमा सुवर्ण खाल (१ अर्घाखाँचीमा भएको थियो । हाल उहाँको ठ्गाना बुटवल – ९, रुपन्देही हो । नवराजका नित्यकर्मपद्धि (२०५८),वेद स्तुति नेपाली व्याख्य (२०६४ ), परमानन्दचरितामृत म संस्कृत काव्यम्(२०६८), नित्यकर्मविधि (२०६९), परमलघुमञ्जूषातत्त्वविचार (व्याकरण २०७३), र कालीगण्डकी (महाकाव्य) कृतिहरू बजारमा आइसकेका छन् । नवराजको शिक्षा क्षेत्रका विविधपदमा रहेर आजसम्म माध्यमिक शिक्षण सेवा (२०४४–२०४७) र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा (२०५० देखि हालसम्म)मा लामो अनुभव छ साथै शिक्षा क्षेत्रमा उहाँले पुर्याएको योगदान अनुकरणीय छ । शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको लामो योगदानलाई कदर गर्दै शिक्षा पुरस्कार (२०६४ले विभुषित हुनु भएको छ । त्रिवेणी साहित्य परिषद, नवलपरासीको आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ ।
You voted 5. Total votes: 406
तीन मुक्तक (जब सँगै हुन्थ्यौं)
editor — Sun, 06/25/2017 - 02:45
जब सँगै हुन्थ्यौं रातहरू पनि रंङ्गिन हुन्थ्यो
अनि छुटिने बेला आउदा निकै कठिन हुन्थ्यो
हराउथ्यौं एक अर्कामा भुलथ्यौ सारा संसार पनि
त्यसैले त पत्तै हुदैन्थ्यो कति बेला दिन हुन्थ्यो
छ मुक्तक (मान्छेबाटै मान्छकै लागि)
Bhawana Kshitij — Wed, 06/21/2017 - 20:37
मान्छेबाटै मान्छकै लागि अनेक जाल रचिन्छ
दुई पैसा झर्छ भने शिरदेखि पाउसम्म घसिन्छ
जति थुपारे नि नपुग्ने भो अब धनको राश
हेर, जमाना आयो कस्तो यहाँ आमाको दुध बेचिन्छ ।
तिम्ले मलाई लेख्न सिकायौ
ashma khanal — Tue, 06/20/2017 - 21:01
भोको उदरलाई जसोतसो भर्न सिकायौ
सुन्दर जीवनमा हाँसी हाँसी मर्न सिकायौ
पीडालाई दबाई अधरमा मुस्कान भर्न सिकायौ
हे समाज ! आज तिम्ले मलाई लेख्न सिकायौ
रित्तो यो मनलाई अनेकौँ भाव बोक्न सिकायौ
editor — Sun, 06/18/2017 - 17:33
प्यारो छ मेरो नेपाल
हिमाल छ शान गजुर
नाच्दछ डाँफे हिमाल
तराईमा नाच्छन् मयुर
पश्चिम देउडा बज्दछ
घन्किन्छ पूर्व सेलोले
गुन्जिने मैथली तराई
पहाडी भाका रैलाले
editor — Sun, 06/18/2017 - 14:24
मैले लेखिन आमाको सपना
सपना त हिजै चुँडिसकेको थियो
मैले लेखिन उनको
गन्तव्य, गन्तव्य त हिजै अपुरो भइसक्यो
मैले सोधिन आमा तिम्रो जीवन कहानी
कहानी त हिजै सुनेकी थिएँ
लेखेकी थिए र देखेकी पनि थिएँ
जहाँ तिमीले पीडा र वेदनाको भारी बोकेकी थियौ
editor — Sat, 06/17/2017 - 21:31
पढाइ र स्रोत साधन भए यो देशमा
दःखी हुने थिएनन नेपाली हेर तहाँ
स्रोत साधन भए नेपाल फल्किन्थ्यो
हिरा र मोती पनि नेपालमा झल्किन्थ्यो
पाखन बेद र ठुलो औषधी नेपालमा
शक्ति छ कति यो दबाईमा
यस्ता अमूल्य चिज अन्त पाइन्छ कहाँ
पाइँदैन खोजेर अन्त विश्वभरिमा
editor — Sat, 06/17/2017 - 21:20
नाथे एउटा जिन्दगीका आयुहिस्साहरू औपचारिकताका उल्झनमा रुमलिएर बित्दो रहेछ । अस्ति भर्खर एकजना मित्रका पिताजी बित्नुभयो । सुनेपछि मलामी हिँडे । घाटमा पुग्दाखेरी करिब करिब अर्थी जलिसकेको थियो । मलामीहरुपनि फात्तफुत्त हिंडिसकेका थिए । केही आवश्यक मान्छेमात्र बाँकी थिए । मैलेपनि हतारहतार एकचिम्टी माटो र केही छेस्का दाउरा चितामा चढाएर मलामी आउनुको औपचारिक रीत पुरा गरेँ । अक्सर आजभोलि मलामी गएका मान्छेहरू चितामा मट्टी चढाएपछि ओल्टोकोटो छेलिँदै बाटो लाग्ने गर्छन् । समयको व्यस्तता र समस्याका जटिलताले मान्छेलाई कसोकसो धेरैतिरबाट बाँध्दै लगेको छ । मान्छे हिजो जस्तो फुक्काफाल स्वायत्त छैन । कतिपय काममा खटाइखटाइ समय चुँडेर निकाल्नु पर्ने भएको छ ।
editor — Sat, 06/17/2017 - 21:12
प्रिय राजेश !
तिमीले लगाइदिएको कल्याणपुरे माटाको सिन्दुरले म सौभाग्यवती भएँ । त्यस भावनात्मक बन्धनले मलाई अर्को सौभाग्य दिलायो । मैले आफूभन्दा उमेरमा जेठो छोरो पाएँ । अहिले तिम्रो प्रिय साथी प्रकाश मेरो छोरो बनेको छ । हरतरहले मेरो हेरचाह गरिरहेको छ । म त त्यसकै ऋणले थिचिने भइयो भन्दै अत्तालिँदै छु ।
You voted 5. Total votes: 230
lxbastola — Sat, 06/17/2017 - 15:58
कहिलेकाहीं घडीले घुम्न बिर्सन्छ
नाकले वास्ना लिन अनि
कानले सुन्न बिर्सिदिन्छ
मात्र आँखाहरू टुलुटुलु हेरिरहन्छन।
मूर्तिझै लाग्ने केही मान्छेका टाउकाहरू
चलायमान एउटा मानव आकृति
Biju Subedi — Fri, 06/16/2017 - 23:49
छोडेर आएँ बसेको ठाउँ अशान्ति भएर ।
फर्केर आएँ आफ्नो नै गाउँ आनन्दी लिएर ।।
सहेर बस्न हुँदैन भन्दा टेरेन कसैले,
एक्लो नै बस्छु सहन्न म त आएको त्यसैले ।
स्वदेश नाउँ लिन नि हुन्न रिसले चिढेँ म,
नेपाली गाउँ रमाउँ जहीँ भन्दै नै हिँडे त ।
editor — Mon, 06/12/2017 - 00:37
साँझमाथि केही कविताहरू
र ममतामयी साँझहरू
फूलका कालीनभन्दा प्राप्तिमय हुन्छन्
एउटा साँझको वितण्डा
एउटा साँझको कथा
BhawaniKhatiwada — Mon, 06/12/2017 - 00:32
हाम्रै पौरखी हात पाउहरुको खाँचो छ त्यो देशमा
हाम्रा सोच विवेक वर्गतहरू खाँचो छ त्यो देशमा
हाम्रा बुद्धि विवेक शक्तिहरुको पर्खाइमा देश छ
नेपालीहरुबाट उच्च तहमा आत्मीय आदेश छ ।
वर्षाको अब याम आउन गयो पानी पर्यो झम्झम
उब्जन्छन् मनभित्र पानी सरीकै इच्छाहरू रंरम
माटोबाट सुवास केही बटुली हावा चल्यो सर्सर
आफ्नो जन्मथलो पसेर स्मृतिमा ऐले भयो हर्हर ।
स्मृतिका पानाबाट - १
HomSuvedi — Mon, 06/12/2017 - 00:28
२०२१ वा बाइस सालतिरको कुरा हो । हिंउदको बेलामा सेउले पाठशालामा गाउँका समकक्षीहरू पढ्न जान्थे, म भने घरमा पितामाताबाट यसअघि नै अक्षरहरू चिनी निकै माथिका कुराहरू पढलेख गर्ने भइसकेको थिएँ । रुद्री चण्डी र अरु अरु धार्मिक कुराहरू निकै पढिसकेको थिएँ ।
म यसरी घरमै पढेर अलिक माथिल्लो तहको भइसकेको भए पनि सबै साथीहरुले पढ्ने पाठशालामा जान नपाएकोमा दिक्क मान्दोरहेछु क्यारे । अरु अरु साथीहरुका हातमा चित्रसहितको ‘ठूलो वर्णमाला’ को किताब देखेर मलाई लोभ लाग्थ्यो । आमाले कसरी हो मलाई पनि सचित्र ठूलो वर्णमाला किनेर हो वा कसरी हो ल्याइदिनु भयो ।
editor — Mon, 06/12/2017 - 00:23
समाजमा सबै मानव एकै हुदैनन् । कोही तीक्षण बुद्धि, कोही समाज सेवी त कोही प्रबुद्ध विद्वान् हुन्छन्। समानुपातिक मानिस अधिक हुन्छन् जो सामान्य सेवा गर्ने र जीविकोपार्जन मात्र गर्दछन् । थोरै वा सीमित मानिस मात्र तीक्ष्ण बुद्धिका कारण उचो पदासीन भएका हुन्छन् । यस्ता प्रबुद्ध वर्गका व्यक्तित्वका मूल्याङ्न उपल्लो तहासिन वर्ग वा सरकार वा सरकार प्रमुखले गर्ने गर्दछ । जसका कारण थप हौसला मिल्दछ र अँझ स्तरीय सेवा प्रवाह हुन्छ । तर यदा कदा मूल्याङ्न व्यक्तिवादी, नातावाद, कृपावादमा उसको प्रबुद्ध र सेवाका आधार हैन, बरु चाकरीबादमा आधार भएर आउनाले, काम र सेवा वापत गरिने पुरस्कार अवमूल्याङ्न हुन पुगेको छ । पदक र पुरस्कार पाउने प्रति नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्थाले त्यस्तो उच्च र सर्वोच्च पदक/ पुरस्कारप्रतिको हेराइ फेरिन थालेकोले मूल्याकनको पद्धति नै धरासायी हुने हो कि भन्ने भय रहेको छ ।
म पनि कुकुर
घाम जून उदाए'नी
दिल बहलायौ मोती
क्यालोरीले धानेको जीवन
नजाने छुरी बर्सन्छन् (गजल)
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक तथा साहित्यिक व्यक्तित्वको संक्षिप्त विवेचना
अविचार, विचार र निर्विचार : एक चर्चा
बस्न तिम्रो केश पाए
त्यसैले त तिमीले........
नारी चरित्रप्रधान उपन्यास
काजी उपाधि प्राप्त दुई अमरसिंह
तिम्रो पछ्यौरी उडायो हावाले
माल्यार्पण (शहिद दिवस विशेष)
सिंहवाहिनी -१५- पन्ध्रौं अध्याय (महिषासुर देवीको लडाइँ)
तीन हाइकु (सूर्यास्त अघि)
म रोए पनि तिमी हाँसिदिनु
शत्रु (भावानूदित लघुकथा)